Taliska Booliska G/Bari oo Sheegay in Ciidanka ay raadinayaan Burcad Badeed Afduubtay Dooni • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Taliska Booliska G/Bari oo Sheegay in Ciidanka ay raadinayaan Burcad Badeed Afduubtay Dooni
Taliska Booliska G/Bari oo Sheegay in Ciidanka ay raadinayaan Burcad Badeed Afduubtay Dooni
April 5, 2010 - By: Abdirahman. A
Shir Jira’id uu maanta magaalada Bosaaso ku qabtay Taliyaha Booliska qaybta gobolka Bari Cismaan Xassan Cawke “Afdaloow” ayaa kaga hadlay dagaal ay Ciidanka amaanka ku qaadeen Kooxo Burcad Badeed ah oo dhowaan afduubtay dooni yar oo siday xoolo oo u rarnayd ganacsato Soomaaliyeed.
Taliyaha ayaa sheegay in doonidaasi laga furtay Burcad Badeedi haystay oo ay tegtay wadanki kusi jeeday oo ah Cumaan ayadoo ka timi dekadda Magaalada Berbera ee Somaliland halkaasi oo ay kasoo qaaday xoolo kala duwan,sida u sheegay taliyaha.
Wuxuuna hadalkiisa intaa raaciyey in lagu daba joogo Kooxdi Burcad Badeeda ee afduubatay doonida kuwaas oo u sheegay in ay isaga degeen,waxaana u tibaaxay in Ciidanka Amaanka ay u diyaar garoobeen in ay dagaal adag la galaan.
Taliye Cismaan ayaa xusay in doonidaas ay siday inka badan 4,000-neef oo xoolo ah isla markaana lagu magacaabo Al-Kitari isagoo shaaciyey in ay si aad ah ula dagaalamayaan Burcad Badeeda.
Dhegayso Warka Taliyaha Qaybta G/bari ee ku saabsan hawlgalka ka hortaga burcad-badeeda ee ay fuliyeen [powerpress]
”Anaga waxaa diyaar u nahay in aan dagaal ku qaadno Burcad Badeeda ee cadeysatay in ay Cunqabateyaan Umadda Soomaaliyeed,waxaan filaaya in Ciidanka Amaanka ay gacanta kusoo dhigaan.dadka waxaan ka codsanaaya in ay meel uga soo wada jeesadaan Burcad Badeeda”,ayuu yiri Taliyaha.
Doonidaas ay Burcad Badeeda Afduubteena oo marki dambe ay si daayeen ayaa la sheegay in ay doonayaan in ay ku afduubtaan Maraakiibta ganacsi ee goosheeya Xeebta Soomaaliya,waxaana laga leeyahay dalka Hindiya.